Tube / Pipe Factory - Mpanamboatra Tube Tube / Pipe, mpamatsy
Takelaka PTFE Polymer
PTFE Plastika momba ny plastika: tonga lafatra ny faritra, tsy misy teboka mainty sy mavo, zorony madio, famirapiratan'ny tampon. Ny hatevin'ny fanamiana; afaka manao loko PTFE miloko, ohatra: fotsy voajanahary, mainty, mavo, mena sy ny sisa; ny fahombiazan'ny tena manokana, azo fenoina fitaovana hafa, ohatra: Varahina, vera fibre, carbon, graphite, moly, APR , sns.: mahazaka toetr'andro: -180 ~ + 260; afaka manao PTFE ravina ravina, PTFE skised ary PTFE sarimihetsika misy habe ......
Gasket Sodina PTFE nilahatra
Gaskets fantsom-pandrefesana PTFE no vahaolana mety indrindra amin'ny fampiharana mitaky fanoherana simika 100% saika ilaina ary ilaina koa ny toetra mekanika amin'ny akora kesika voafintina. Izy ireo dia mahavita tsara amin'ny indostrian'ny sakafo sy ny fikirakirana izay tsy ahazoana mandoto ny salantsalany, mety amin'ny alkaly mahery antonony, ranoka cryogenika, oxygen, gazy klôro sns.
Avaratra savaivony - 7/8 ″ (22.2 mm na .875 ao.) Diamètre ao anatiny - 5/8 ″ (15.8 mm na .600 in.) Rindrina - 1/8 ″ (3.2 mm na .131 in.) Mahazaka ny polymer mari-pana miakatra 500 Deg F. Afaka manapaka ny halavany ho anao izahay. Ny fantsona PTFE dia manolotra coefficient ambany fikororohana izay afaka mamela ny fikorianana avo kokoa sy ny fanasana mora kokoa, manampy amin'ny fanafoanana ireo reside mandoto ny dingana. Ny permeation ambany dia ahafahana mampiasa amin'ny serivisy gazy simika sy gazy manokana. Ahitana dielec avo ...
PTFE (fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Polymer) dia manana ny fiaraha-miasa farany ambany ambany misy akora matanjaka indrindra ary mandaitra tokoa amin'ny fiakaran'ny hafanana mahery. Ity fantsona ity ihany koa dia manana fanoherana simika mahafinaritra sy fananana insulation elektrika tena tsara. Na izany aza, ny fantsona PTFE dia mety ho sarotra ny mamatotra azy, saingy tsy mitsonika ary mamono tena ihany koa. Ny mpanamboatra anay dia manao plastika injeniera izay somary lehibe loatra amin'ny savaivony sy / na ny hateviny. Natao hanampiana ny mpanjifa ...
Fitaovana: PTFE mari-pana miasa: -200-260 diplaoma Faharetana: ≥348% Herin'ny tensile: 18 MPa ivelan'ny diamter: 50mm PTFE Tube an'ny Extruded, bobongolo ary feno. Ptfe tubing extruded OD manomboka amin'ny 1mm ka hatramin'ny 300mm. Fantsom-bozaka ptfe vita amin'ny 30mm ka hatramin'ny 600mm. o ptfe fantsona dia manana fampiharana maro manerana ny indostria. Ny fananana tsy manam-paharoa dia mamela ny fantsona hamaha olana mety tsy misy ...
PTFE Press Sodina fantsona, PTFE Tubing
Tube press Tube ho an'ny PTFE virjiny, Recycle PTFE, Bronze% mifangaro, fibre vera mifangaro, Graphite, fibril carbon, polybenzoate, polybmenzoate, Polyimide mifangaro, sns. Ny kirihitrala PTFE feno dia vita amin'ny alàlan'ny fantsom-panafody resin PTFE vita amin'ny polymerized. Anisan'ny plastika efa misy rehetra, ny PTFE nofenoina dia manana fanoherana ny hamafisan-drivotra tsara indrindra sy diélectricité. Fitaovana mitaingina tànana, kirihitra PTFE mahazaka harafesina, ...